UTinkler akumethusi ukubhekana neBucs koweligi - Impempe
UTinkler akumethusi ukubhekana neBucs koweligi
March 2, 2022 Impempe.com
Umqeqeshi weCape Town City, u-Eric Tinkler, uthi kukhona okubagqugquzelayo ukuthi baye emdlalweni wabo weDStv Premiership ne-Orlando Pirates, benokuzethemba okukhulu.
ICitizens inomdlalo onzima neBucs e-Orlando Stadium, eSoweto, ngoLwesithathu ngo-5.30 ntambama. Le Pirates abaya kuyona isanda kubhudluza iRoyal Leopards ngo 6-2 emdlalweni weCAF Confederation Cup ngempelasonto.
“Siya emdlalweni onzima kakhulu weligi lapho sizodlala khona ne-Orlando Pirates ekuhambeni, ngoLwesithathu ebusuku,” kusho uTinkler.
“Bekubalulekile ukuthi ngemuva kwekhefu (likaJanuwari) siqale kahle emidlalweni yeligi, njengoba sithole amaphuzu aphelele sibhekene neGolden Arrows.
“Lokhu kube kuhle kakhulu. Sithole ezinye izinsuku ezingaphezulu zokusebenza nabadlali abasha. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu ugqugquzelekile ukuya kwiPirates, sizame ukuthola amaphuzu abalulekile kulesi sikhathi sesizini.”
EzikaTinkler zishaye Abafana Bes’thende ngo 1-0 emdlalweni odlule nokuyinto abona ibanike ukuzethemba kakhulu lo mqeqeshi.
“Ngeke kube lula neze ngoba bayiqembu elifuna ukuqeda kwiTop 4 ukuze baphinde bazibekisele indawo emidlalweni yeCAF.
“Nokho nathi sinazo izinto zethu esifuna ukuzifeza ngakho kuzomele silwe uma sesibhekene nePirates ngoLwesithathu,” kuphetha uTinkler oke wazicija eZimnyama.
Previous Previous post: Iphunyulile i-Arrows ekuphucweni amaphuzu
Next Next post: Usuthu lulobizela iwini yokuqala onyakeni kweyeligi